Zvigadzirwa Vagadziri & Vatengesi - Kutumira Ziling - Chikamu 2
3-ply foam liners inogadzirwa nematatu matatu: yakatetepa furo musimboti yakaiswa pakati pezvikamu zviviri zveLDPE firimu. 3-ply foam liner inowanzo shandiswa zvakasiyana ne furo liner. Nekudaro, inotoita zvirinani pane yenguva dzose feni liner. Kufanana neyefeni liner, izvi zvakare hazvigadziri isina mweya chisimbiso.
Iyo inonaka uye haina hwema, uye ine yakadzika mwero kutapurirana mwero, zvichireva kuti inodzivirira hunyoro kupinda muhombodo uye kukanganisa chigadzirwa.